Xog: yaa ka dambeeya Xil ka qaadista ay Xildhibaanadda Hirshabelle ku sameeyeen Madaxwaynihii Maamulkaasi,? – Hornafrik Media Network
Shaqaalaha Madaxtooyada oo lagu amaanay Olalaha Isxilqaan
Maxeey ka wada hadleen Geelle & Farmaajo
Xog: yaa ka dambeeya Xil ka qaadista ay Xildhibaanadda Hirshabelle ku sameeyeen Madaxwaynihii Maamulkaasi,?
Kulan uusan Gudoominayn Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle oo ay isugu yimaadeen Xildhibaano ka tirsan Baarlamaankaasi ayeey Kalsooniddii kala laabteen Madaxwayne Goboleedka Hirshabelle, Cali C/laahi Cosoble. Waxaana Cod ay qaadeen ay 68 Xildhibaan u codeeyeen in Kalsoonidda laga laabto Cosoble, halka 4 Xildhibaana ay diideen. iyadoona Guud ahaan ay Tiradda Baarlamaanka Hirshabelle yihiin 98 Xildhibaan.
Marka laga reebo sheegashadda Xildhibaanadan ma jirin Wariyayaal loo oggolaaday inay Goobjoog ka ahaadaan Kulanka, sidoo kale Madaxwaynaha ay sheegeen inay kalsoonidda kala laabteen ma joogin goobta isaga iyo cid ka wakiila toona. Marwo Canab Axmed Ciise oo guddoomisay shirkan ayaa ku dhowaaqday in kalsoonida lagala laabtay Madaxweyne Cosoble.
yaa ka dambeeyay Buuqa Siyaasadeed ee Hirshabelle,?
Hornafrik waxay maalmihii la soo dhaafay isha ku haysay siday wax uga socdaan Jowhar, Waxaana ay ogaatay in Mooshinka ka dhanka ah Cosoble ay wax ka abaabulaysay Dawladda Federaalka Somalia, iyadoo isticmaalaysa Madaxwayne Ku Xigeenka Maamulkaasi, Cali Guudlaawe oo aysan isku wanaagsanayn Madaxwayne Cosoble.
Cali Guudlaawe oo awood badan ku leh Jowhar, isla markaana ay ka amar qaataan Maleeshiyaad farabadan ayaan isku arkin inuu Ku Xigeen u yahay Cosoble, Waxaana uu gabi ahaanba diiday inuu wax wada shaqayn ah la sameeyo, isagoona ay u taalo Gobolka Shabeeladda Isbaarooyin farabadan oo ay uga soo xaroodaan dhaqaale farabadan, taasoo fursad u siisay inuu awood ku dhex yeesho Baarlamaanka Hirshabelle oo ku shaqeeya Jowhar.
Xarunta KMG ah ee Maamulka Hirshabelle oo ah Jowhar inta badan ma taggo Madaxwaynaha Maamulkaasi, Cali C/laahi Cosoble, Waxaana lagu macneeyaa sababta uu u tagi waayay Jowhar inay la xiriirta Awood Maamul oo aan halkaasi ka jirin, iyadoona Magaaladdu ay tahay mid ay Maamulaan Maleeshiyaad qaab qabiil u abaabulan oo uu hoos tagga Cosoble.
Dawladda Federaalka Somalia iyo Cosoble ma lahan Xiriir wanaagsan, Waxaana uu marar badan hor istaagay Go’aano ay Dawladda u yeeriyeen Maamuladda Puntland iyo Jubbaland, waxayna taasi keentay in Dawladdu ay u aragto Caqabad ay tahay in laga taqaluso, waana sababta ay gadaal uga taagnayd Xildhibaanadda Hirshabelle ee Mooshinka ka keenay Cosoble.
Cosoble waxa uu sidoo kale ku hawlanaa in dib loo furo Dekadda Dabiiciga ahayd ee Ceel Macaan iyo Garoonka Diyaaradaha Cisaleey oo ka mida Deegaanadda Hirshabelle, Waxayna Dawladdu is hortaag ku samaysay in la furo Garoon iyo Dekad cabaqad ku noqon kara Muqdisho oo ah Isha Dhaqaale ee ay leedahay Dawladda Dhexe ee Somalia.
Inkastoo aysan Dawladdu illaa hadda war rasmiya ka soo saarin siday u aragto arrintan haddana waxay sheegayaan Wararka ay Hornafrik helayso in goor dhow Muqdisho laga soo saari doono Warsaxaafadeed ay Dawladdu isaga dhigayso in Doorkeedu yahay Dhexdhexaad.
Madaxwayne Cali C/laahi Cosoble ayaa isna la filayaa inuu goor dhow soo saaro Warsaxaafadeed uu kaga hor imaanayo Go’aanka Xildhibaanadda. Waxaana laga yaabaa inuu eedeyn u jeediyo Dawladda Dhexe ee Somalia.
Cali Guudlaawe oo ah Ku Xigeenka Cosoble, isla markaana Xildhibaanadan soo abaabulay ayeey xubno ka ag dhow u sheegeen Hornafrik inuusan ka hadli doonin arrintan.
Hirshabelle oo ah Maamulkii ugu dambeeyay ee ka dhisma Somalia ayaa hadda cagta saaray burbur, Waxaana la aaminsan yahay in Go’aanka Maanta uu sababi karo in Shabeeladda Dhexe iyo Hiiraan oo markii hore wax isku darsaday inaysan dib dambe isugu imaan doonin.
Magangalyo Doon Soomaali ah oo loo haysto Burcad Badeednimo Wadanka Talyaaniga.
Magaaladda Jowhar oo ay ka jirto Xiisad Siyaasadeed, kadib markii uu gaaray Cosoble, iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle oo ku biiray dhinac ka mida dhinacyadii is hayay.